Mogadishu Journal » Mas’uuliyiin kormeer ku tagtay furumaha dagaalka ee Bariire
Russia-Ukraine live: Moscow says all war ‘goals’ must be met
Mas’uuliyiin kormeer ku tagtay furumaha dagaalka ee Bariire
Mjournal :-Gudodomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax iyo mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxaa ay kormeer ku tageen deegaanka Bariire ee Gobolkaasi Shabeellaha Hoose,halkaas oo dhawaan ay la wareegeen Ciidamo ka tirsan kuwa Kumaandoosta Soomaaliya.
Kormeerka gudodomiyaha ayaa waxaa ku wehlinayay wasiirka Amniga Maamulka Koonfur Galbeed, qaar ka mid ah Maamulka gobolka iyo Xildhibaan Nuur Siidow oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federalka ee Soomaaliya.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidamada eek u sugan deegaanka Bariira,iyaga oo warbixin ka siiyay xaalada Bariire,waxaana uu uga mahad celiyay sida ay u xaqiijiyeen amniga deegaankaas.
Waxaan u mahadcelinayaa Taliye captain Abdi Ali Raage iyo ciidamadiisa sida ay ugu adkaadeen cadowga alshabaab ayagoo xaqiijiyay Amniga deegaanka Bariire ayuu yiri Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose.
Deegaanka Bariire ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa xilligaan gacanta ku haya Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee DANAB, kuwaas oo dhowr bilood ka hor kala wareegay Ururka Al-Shabaab.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya oo dhex-dhexaadinaya dhinacyada Sudan
Sarkaal ciidan oo isku daldalay Magalada Muqdisho
Hanti-dhowraha Guud & Ergayga gaarka ah oo la kulmay Madax ka tirsan Bankiga Aduunka (Sawirro) by mjournal - Wed Jun 29th 16:55:12
Madaxweyne Deni oo Guddoomiyay Shir Arrin muhiim ah looga hadlayay (Sawirro) by mjournal - Wed Jun 29th 16:53:10
Muxuu Axmed Madoobe ku soo arkay xaafad ka tirsan degmada Dhoobley? (Sawirro) by mjournal - Wed Jun 29th 16:49:00
Xiisada Ethiopia iyo Sudan oo cirka isku shareertay iyo wararkii ugu dambeeyay by mjournal - Tue Jun 28th 17:46:24
Sawiro: Xamsa & Rooble oo si wadajir ah u booqday xarunta cusub ee xukuumadda by mjournal - Tue Jun 28th 17:44:12